Big Cartel: အနုပညာရှင်များအတွက်အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှု | Martech Zone
သူတို့ရဲ့တွဲဖက်တည်ထောင်သူကသူ့တီးဝိုင်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဖို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းကြီး ယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလွတ်လပ်သောအနုပညာရှင် ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်၏နေရာဖြစ်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးသူများကသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ရရှိရန်ကူညီရန်သူတို့၏အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအထူးတည်ဆောက်ထားသည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုပါ။ Long ကအဆိုပါ Swarm Live, အဝတ်အစားဒီဇိုင်နာ။
လျင်မြန်စွာ setup ကို - ရိုးရိုးစတိုးဆိုင်တစ်ခုကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအွန်လိုင်းတွင်ရယူပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ် - အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
စီးပွားရေးအတွေးအခေါ် - အစီရင်ခံခြင်းနှင့်အမိန့်စီမံခန့်ခွဲမှု။
အမှတ်တံဆိပ် - ရိုးရှင်းပြီးအဆင့်မြင့်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူများသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးဓာတ်ပုံများ၊ အရောင်များနှင့်ဖောင့်များကိုအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းများ - သင်ပိုင်ဆိုင်သောမည်သည့်ဒိုမိန်းကိုမဆိုသင်၏စတိုးဆိုင်ကိုစိတ်ကြိုက် URL တစ်ခုပေးမည်။
အမိန့်ကိုစီမံသည်s - သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အမိန့်စီမံခန့်ခွဲမှုandရိယာနှင့်အမိန့်အတည်ပြုချက်အီးမေးလ်များ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကအကောင်းဆုံး - Google ၏အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဆိုင်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု - Real-time dashboard stats နှင့် Google Analytics ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်စတိုးဆိုင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကြီးထွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
လျှော့ကုဒ်များ - လျှော့စျေးကုဒ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုစျေးကွက်တင်ရန်၊ သင်၏စတိုးဆိုင်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သစ္စာရှိဖောက်သည်များအားဆုချရန်နည်းလမ်းများစွာကိုပေးသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန် - ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာ၊ ဂီတ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဖောင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ စက်သီး.
Facebook ပေါ်မှာရောင်းပါ - သင်၏စတိုးဆိုင်ကိုမည်သည့်ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင်မဆိုပေါင်းထည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းထားသော Facebook အက်ပ်မှတစ်ဆင့်သင်၏ပရိသတ်များကိုသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
မိုဘိုင်းကုန်ပစ္စည်း - သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို iPhone နှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချပါ Big Cartel အက်ပလီကေးရှင်း.
Tags: ဂိုဏ်းကြီးဒီဂျစ်တယ် download စတိုးအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းအနုပညာရှင်များအတွက်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစက်သီးအွန်လိုင်းအနုပညာရောင်းအွန်လိုင်းဖက်ရှင်ရောင်း
JustUnfollow - တွစ်တာနောက်လိုက်များကိုစီမံခြင်း၊